ကနေသံကိုအသံသွင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းမရရှိနိုင် xeno-canto, macaulaylibrary.org & avocet.zoology.msu.edu.
မျိုးစိတ်အမည်ဖြင့် Recordist နေ့စှဲ တည်နေရာ မှတ်ချက်တွေ Cat.nr.
Xeno-Canto : အားလုံးအသံသွင်းသူတို့ရဲ့ recordists နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နှင့်တစ်ဦး ကို Creative Commons Attribution-ရယူထားရတာ-NoDerivs 2.5 လိုင်စင် ။
Macaulay စာကြည့်တိုက်အသံသွင်း အသုံးပြုမှု ၏ Macaulay စာကြည့်တိုက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ဤနေရာတွင်ပေါ်လာမည်။
AVoCet အသံသွင်း : အားလုံးအသံသွင်းသူတို့ရဲ့ recordists နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နေကြသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းခွင့်ပြုချက် AVoCet အတွက်တစ်ဦးချင်းစီမှတ်တမ်းတင်စာမျက်နှာများအောက်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 285,878,909 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ